In ka badan 60 carruur ah oo ku dhintay dhakhtar India kadib (oxygen) neef la’aan - Horn Future
In ka badan 60 carruur ah oo ku dhintay dhakhtar India kadib (oxygen) neef la’aan
Luknow (Horn Future)-Waxa dalka India ku dhintay ugu yaraan 64 carruur ah dhakhtar ku yaal gobolka waqooyi ee Uttar Pradesh todobaadkii hore,taasoo keentay in warbaahinta guduhu ku eedeeysay dhimashadan iyada oo aanan la helin sahayda lagu neefsado ee loo yaqaano (oxygen)ka sida ay sheegtay warbaahinta caalamku.
Kuliyadda Caafimaadka ee (BRD Medical College) ee degmada Gorakhpur ayaa xaqiijisay in 34 carruur ay ku dhinteen qeybta daryeelka xooge le loogu fidiyo caruurta kasoo hor marta xilliga dhalmadda, halka 12 kale ay u dhinteen sababta cudurka loo yaqaano( encephalitis),iyada oo Inta kale aanan la sheegin sababaha dhimashadooda.
Carruurtan ku dhimatay dhakhtarkan ayaa waxa ay isku gu jiraan kuwo dhawaan dhashay oo yaryar ilaa 12 jiro sida ay sheegtay warbaahintu.
Warbixinno kala duwan oo warbaahineed oo gudaha ah ayaa lagu sheegay in carruurtan ay dhinteen kadib markii shirkadda bixisa sahayda lagu neefsado ee (oxygen)ka ay joojisay adeeggii ay fidinaysay, taas oo u muuqata sababo la xidhiidha in aanan la bixin lacagaha kharashkeega oo dhan inta u dhaxeeysa $ 50,000 ilaa (S $ 68,000) oo dollar ka Maraykanka ah.
Dhinaca kale Dr R. S. Shukla oo ah agaasimaha guud ee caafimaadka ayaa beeniyay eedeeymaha ah in dhimashadu ay sabab u tahay yaraanta neeftan ama (oxygen)ka.
Anil Kumar oo ah gudoomiyaha guddi-hoosaadka ee Gorakhpur oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxa uu yidhi: “Waxaan bilownay baadhitaan waxana soo bixi doonta warbixin hor dhac ah, Haa waxa ku dhintay 60dan bukaano dhakhtarkan 5tii maalmood ee ugu dambeeysay,laakiin u maleeyn maayo inay ku xidhan tahay warbixinnada yaraanta(oxygen)ka, “.
Dhiniciisa gudoomiyaha dawlad goboleedka Uttar Pradesh Yogi Adityanath oo ku abtirsada xisbiga talada haya ee taageerada ka haysta Hinduska xagjirka ah ayaa war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiskisa amar ku bixiyay in la sameeyo baadhitaan,iyada oo lagu sheegay qoraalkan in dhammaan dhimashadu ay ka dhacday qaybta carruurta ee dhakhtarkan muddo 5 maalmood ah laga bilaabo Isniintii lasoo dhaafay.
« Macaaradka Kenya oo ku eedeeyay ciidamada dilka in ka badan 100 kamid ah dibad-baxayaal	» Benefits cheat who posed as a single mother to claim £102,000